Ambohitompoina-Antanifotsy Telolahy tratra nanaparitaka vola sandoka
Lehilahy miisa telo no tratra nanaparitaka vola sandoka tany Ambohitompoina Antanifotsy ny harivan’ny 25 jona lasa teo.
Teo am-pividianana sigara ny iray tamin’izy ireo no tratra rehefa nanolotra vola sandoka 20.000 Ar. Tamina toeram-pivarotana iray ihany izy telolahy ireto no nanao izany. Efa mailo anefa ny mpivarotra ka teo no nahatrarana azy ireo. Mbola nahitana 20.000 Ar sandoka miisa fito tany amin’izy ireo rehefa nosavaina. Marihina moa fa mitondra moto izy nogiazana avy hatrany io fitaovam-pitanterana fitondran’izy ireo manao ny asa ratsiny io. Nentina natao fanadihadiana tao Antanifotsy izy ireo taorian’izany.